Kitra – «Super coupe d’Espagne»: adin’ny samy Madrid ny famaranana | NewsMada
Kitra – «Super coupe d’Espagne»: adin’ny samy Madrid ny famaranana
Ho fantatra, rahampitso alahady, izay hibata ny «Super coupe d’Espagne», taranja baolina kitra. Hifandona amin’izany ny Real de Madrid sy ny Athletico de Madrid. Hatreto, manantombo eo amin’ny isan’ny fandresena ny Real.
Hotanterahina, rahampitso alahady ao amin’ny kianja King Abdullah Sport City (Jeddah) any Arabia Saodita, ny famaranana hiadiana ny “Super coupe d’Espagne”, taranja baolina kitra. Adin’ny samy ekipan’i Madrid ny fihaonana. Hifandona amin’izany ny Real sy ny Athletico. Ekipa efa diso mifankahalala tsara ny roa tonta. Na izany aza, mbola manantombo eo amin’ny isan’ny fandresena ny Real.
Raha hiverenana kosa ny manasa-dalana, nitranga ny tsy nampoizina satria resin’ny Atletico, tamin’ny isa tery, 3 no ho 2, ny FC Barcelone. Tsy nisy nanampo mihitsy ny fihaonana teo amin’ny roa tonta. Betsaka ny nanome tsiny ny mpitsara satria nisy ireo baolina roa matin’ny Barca nolavina, taorian’ny fijerena izany tamin’ny Var.
Tsy nisy ny baolina maty, tao anatin’ny fizaram-potoana voalohany. Nanokatra ny isa kosa ny Atletico, tamin’ny alalan’i Koke, kapiteny, teo amin’ny minitra faha-46. Nosahalain’ny Barcelone izany teo amin’ny minitra faha-51, rehefa namono baolina i Messi. Tsy nijanona teo fa mbola nitarika hatrany ny Barça, rehefa nampiditra baolina faharoa i Griezmann, teo amin’ny minitra faha-62.
Tao anatin’ny 10 mn farany kosa no namadihan’ny Atletico ny tantara. Minitra faha-81, nosahalain’i Morata izany tamin’ny alalan’ny “penalty”. Mbola nampian’i Correa izany tany amin’ny 4 mn tsy hiravana. Nitolefika tanteraka ny Barcelone, taorian’io baolina tafiditra io.
Teo amin’ny ankatoky ny famaranana ilany kosa, resin’ny Real de Madrid, tamin’ny isa 2 no ho 1, ny FC Valence.
Tsy ho afaka ny hilalao amin’ity famaranana ity i Koke, ho an’ny Atletico de Madrid, noho ny ratra nahazo azy. Tsy mbola fantatra kosa izay hisolo azy amin’izany.